आफ्नै अभिनय देखेर हाँस उठ्छः... :: अशेष अधिकारी :: Setopati
१०+२ सकेपछि टिभीमा काम गर्न थालेको पाँच वर्ष भइसकेको थियो। मैले 'जिन्दगी रक्स' 'खोजी प्रतिभाको' जस्ता विभिन्न काम गरेँ। म्युजिक भिडियोको पनि क्यामरा पछाडि काम गरिरहेको थिएँ। मास्टर्स सकिसकेको थिएँ। घरमा पढेलेखेको छोरो बिग्रियो भन्ने थियो। फिल्म गरेर विदेश जाने सहमतिमा मैले लगानीका लागि कन्भिन्स गराएको थिएँ। नत्र मेरो मामाघर, आफन्तहरूले म बिग्रिए भनेर कुरा गर्थे। ममीलाई सुनाउँथेँ।
'प्रेमगीत'मा कसरी आइपुग्नु भयो?
'इस्केप' माघतीर रिलिज भयो। त्यसपछि वैशाखमा भुँईचालो आयो। बाहिर जान लोन आदिको लागि बैंकले भ्यालुएसन गर्न मानेका थिएनन्। म यतिकै काममा थिएँ।
अभिनेताको काम अभिनय गर्ने हो। मैले हँसाउन सकिरहेको छु, रूवाउन सकिरहेको छु, मेरा अभिनय 'अड' देखिएका छैनन्। सायद, म अहिलेसम्म सफल एक्टर हो कि!
मलाई व्यक्तिग तरूपमा गर्न मन लाग्ने जनरा बायोपिक हो। बायोपिकका पात्रहरू ममा देखियो भने कलाकारका रूपमा जीवन्त भइन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यस्ता फिल्म गर्ने इच्छा छ। 'दीपेन्द्र सरकार' मैले त्यही भएर गर्न लागेको हुँ।
मेरो त्यस्तो केही छैन। मलाई त्यस बारेमा केही थाहा पनि छैन्। त्यो कसरी गर्ने भनेर मैले सिकेको पनि छैन। त्यसमा छिर्न पर्छ भनेर लाग्दा पनि लाग्दैन र आजसम्म गरेका फिल्ममा गरेको पनि छैन। 'प्रेमगीत' र 'प्रेमगीत २' हेर्दा पनि त्यस्तो फरक म देखिएको छैन। केही फरक त छ। तर, त्यस्तो मानक नै हुने गरी म फरक देखिएको छैन। मैले टेकमा जिस्किँदा जिस्किदै आफ्नो पात्रहरूको अभिनय गरिहेको छु।
अभिनेता क्रिएटिभ हुनुपर्छ भन्नेमा अर्को फरक बुझाइ त छैन् तर त्योसँगै मूख्य कुरा भनेको 'एक्टर' 'एडप्टिभ' हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। फिल्म गर्ने शैली निर्देशक पिच्छे फरक हुन्छ। एक्टर ती निर्देशकको माग अनुसार भइदिने हो, उनीहरूको भिजनलाई 'एडप्ट' गर्ने हो।
एक्टरले आफैं क्रियटिभ हुन लाग्यो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर ऊ 'रिपिटेटिभ हुन्छ। एक्टर त्यसमा 'जिरो' भएको राम्रो। ऊ आफ्नो भन्दा पनि निर्देशकको कलाकार हुनुपर्छ। निर्देशकले के माग्छ, त्यो गर्न सक्ने हुनुपर्छ। मलाई सिलसिला मिलाएर पात्रमा छिर्न आउँदैन। निर्देशकले भनेको कुरा एडप्ट गर्न आउँछ। मैले जानेको त्यही हो।
यसमा उहाँहरूको मेन्टालिटी नै गलत छ। मार्केट छैन भनेर प्रोडक्ट लो क्वालिटीको बनाउने होइन। हाइ क्वालिटीको बनाउने हो। यसबाट मार्केट बढ्ने मैले देखेको छू। 'प्रेगगीत २' को मेरो अनुभवले त्यही देखाएको छ।
त्यसैलाई मध्यनजर गरेर फिल्मको सुटिङ थाइल्यान्ड र बर्मा गरेका हौ। प्रेमगीतको बेलामा ती देशमा फिल्म हेर्ने दर्शकहरूको संख्या देखेर नै 'प्रेम गीत २' त्यो स्केलमा बनाउने हिम्मत आएको हो। बजार खोज्नुपर्‍यो, खाली गुनासो गरेर भएन।
अहिलेसम्म 'फेस टु फेस' भेटघाट र बोलचाल भएको छैन। मेरो भनाइ के हो भने आफूले गल्ती गरेर सिक्नु राम्रो हो भने अर्काको गल्तीबाट सिक्नु झन राम्रो हो।
पछिल्लो 'कृ' हेरेँ। 'गाजलु' र 'ड्रिम्स' पनि हेरेको छु। 'होस्टल' चाँहि यूट्यूबमा हेरेको छु।
मैले चार निर्देशकसँग काम गरेँ। चार जनाको आ-आफ्नै विशेषता छ। अन्नत घिमिरे सम्पादक बढी हुनुहुन्थ्यो, त्यो फिल्म उहाँ र मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा बनायौं। सुदर्शन थापा सही निर्णय गर्न सक्ने निर्देशक हो, लिडर हो। रामशरण पाठक क्रियटिभ मान्छे हो। तर, निर्देशकका रूपमा 'डिसिसिभ' पावर कमजोर छ। मिलन चाम्ससँग एउटा क्रियटिभिटी छ, डिसिजन मेकर पनि हो र सबै डिपार्टमा आफैं काम गर्न तम्सिने स्वभाव छ। यी चिजमा तपाईँले हेर्ने हो डिसिसिभ पावर भएको मान्छे राम्रो हो।
मैले भन्न खोजेको म त्यसमा हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्ने हो। 'लिली बिली'मा पनि प्रियंका लिने कुरा हुँदा अनेक टिकाटिप्पणी भएँ। मैले प्रियंकालाई लिन हुन्न भनेर कहिल्यै भनिनँ। मैले त निर्देशक र क्रियटिभ टिमलाई विश्वास गर्ने हो। उनीहरूलाई राख्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरामा मैले ज्यादा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन। त्यही भनेको हो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २९, २०७४, ०५:४०:१८